Qaraxyo ka dhacay Stockholm (War Cusub) | Somaliska
War cusub2: Laanta Amaanka ee Sweden (Säpo) ayaa xaqiijisay in weerarka ka dhacay Stockholm uu ahaa mid argagixiso oo qof isku qarxiyay, waa markii ugu horeysay oo Stockholm weeraro argagixiso lagu soo qaado. Labo qarax ayaa ka dhacay bartamaha Stockholm ayadoo uu 1 qof ku [caption id="attachment_976" align="alignright" width="300" caption="Wadada Drottninggatan"] [/caption] geeriyooday halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen. Gaari ayaa ku qarxay wadada caanka ah ee lagu magacaabo Drottninggatan oo ay u badanyihiin dalxiisayaasha. Waxyar ka dib ayaa qarax kale laga maqlay goobkale oo ka tirsan isla wadada ayadoon ilaa hada la ogeyn waxyaabaha sababay qaraxyada. Wararka qaar ayaa sheegaya in baabuurka qarxay ay ku jireen gasacyo gaas ah. Qaraxyada ayaa ahaa kuwo xoog leh oo dhawaaqoodu sareeyo ayagoo qiic ka kiciyay goobta ay ka dheceen. War cusub1: Warar cusub ayaa sheegaya in qofka ku dhintay meesha uu ahaa mid asagu is qarxiyay ayadoo hada loo badaniyo in weerarkaan uu ahaa mid argagixiso. Wakaalada wararka TT ayaa soo tabineysa in ay heshay e-mail ku socda dadka Swedishka ah iyo Muslimiinta oo dadka soo qoray ay digniin u dirayaan Sweden ayagoo uga digaya in ay kala baxaan ciidamadooda Afghanistan iyo in ay joojiyaan aflagaadada lagu haayo nabiga. Sidoo kale e-mail ayaa loogu baaqay Muslimiintu in ay kacaan.
War cusub2: Laanta Amaanka ee Sweden (Säpo) ayaa xaqiijisay in weerarka ka dhacay Stockholm uu ahaa mid argagixiso oo qof isku qarxiyay, waa markii ugu horeysay oo Stockholm weeraro argagixiso lagu soo qaado.
Labo qarax ayaa ka dhacay bartamaha Stockholm ayadoo uu 1 qof ku
geeriyooday halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen. Gaari ayaa ku qarxay wadada caanka ah ee lagu magacaabo Drottninggatan oo ay u badanyihiin dalxiisayaasha.
Waxyar ka dib ayaa qarax kale laga maqlay goobkale oo ka tirsan isla wadada ayadoon ilaa hada la ogeyn waxyaabaha sababay qaraxyada.
Wararka qaar ayaa sheegaya in baabuurka qarxay ay ku jireen gasacyo gaas ah.
Qaraxyada ayaa ahaa kuwo xoog leh oo dhawaaqoodu sareeyo ayagoo qiic ka kiciyay goobta ay ka dheceen.
War cusub1: Warar cusub ayaa sheegaya in qofka ku dhintay meesha uu ahaa mid asagu is qarxiyay ayadoo hada loo badaniyo in weerarkaan uu ahaa mid argagixiso. Wakaalada wararka TT ayaa soo tabineysa in ay heshay e-mail ku socda dadka Swedishka ah iyo Muslimiinta oo dadka soo qoray ay digniin u dirayaan Sweden ayagoo uga digaya in ay kala baxaan ciidamadooda Afghanistan iyo in ay joojiyaan aflagaadada lagu haayo nabiga. Sidoo kale e-mail ayaa loogu baaqay Muslimiintu in ay kacaan.